Metrobus မော်ကွန်း - ထို rayhab
İmamoğlu: 'ကျွန်တော်တို့ရဲ့အသစ်အ Metrobus လိုင်းသူများဖြစ်ကြလိမ့်မည်' '
Metro ကျောက်ခေတ်-Mecidiyeköy-Mahmutbey အတွက်အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်မြို့တော်ဝန် Ekrem İmamoğluစစ်ဆေးရေးခရီးစဉ်ယနေ့ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ İmamoğlu, ခရီးစဉ်ဖုံးလွှမ်းသူမြေအောက်ရထားနှင့်ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနှင့်ထိန်းချုပ်မှုစင်တာအတွက်လေ့လာတွေ့ရှိချက်ပြီးစီးဇာတ်စင်၌တည်ရှိ၏ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ အလုပ်ခွင်ပြီးနောက်İmamoğluမြေအောက်အလုပ် [ပို ... ]
Üsküdar Metrobus မတော်တဆ! 10 ဒဏ်ရာရ
Üsküdar Metrobus မတော်တဆ! 10 ဒဏ်ရာရ။ အစ္စတန်ဘူလ် Uskudar Burhaniye တစ် metrobus Metrobus ထိတ်လန့်ရလဒ်များ၏ရှေ့မှောက်၌ရပ်တန့်, ကနဦးအစီရင်ခံချက်များအရသိရသည်ယာဉ်မောင်းနှင့်ခရီးသည် 10 ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ ရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များSöğütlüçeşmeအဆိုအရဇူလိုင်လ 15 နေ Metrobus သည့်အာဇာနည်နေ့တံတားဦးတည်ချက်ရန်, [ပို ... ]
အမြင်စစ်ဆင်ရေး IETT ကားမောင်းသူ MI ပြီးပြီလား
ဝန်ဆောင်မှု-အလုပ်သမားများသမဂ္ဂ,, IETT ယာဉ်မောင်းဆန့်ကျင်အမြင်စစ်ဆင်ရေးဟုညွှန်ပြ "ယာဉ်မောင်းသို့မဟုတ်မကငျြ့ဝတျရက်များလျှင်အဖြစ်အမြင်ဖန်တီးဖို့လျှင်နည်းပညာဆိုင်ရာသွေးဆောင်အောင်မြင်မှုများလုပ်နေတာ။ " သူအကဲဖြတ်ဖန်ဆင်းတော်မူ၏။ ပြည်ထောင်စုအနေဖြင့်ရေးသားထားသောကြေညာချက်, CHP အစ္စတန်ဘူလ်လက်ထောက်အတွက် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ် Mecidiyekoy Metrobus မတော်တဆ
တစ်မှတ်တိုင်အကြားပျက်ကျခဲ့နှင့်အတူအစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Zincirlikuyu Metrobus Mecidiyekoy ။ လမ်းသွားလမ်းလာနှင့်အတူအတွက် 12အပါအဝင် Metrobus ခရီးသည်, မတော်တဆမှုအတွက်ဦးဒဏ်ရာရရှိခဲ့သည်။ Metrobus ခရီးစဉ်ခဏရပ်လိုက်တယ်။ 23.15 မှာမတော်တဆ, အ Mecidiyekoy-Zincirlikuyu- မှတ်တိုင်များအကြားပေါ်ပေါက်အဖြစ် [ပို ... ]
2 အင်္ဂါနေ့မှာလေလံတင်ရောင်းချပါလိမ့်မည်ဘတ်စ်ကားရေကန်ပေါ်မှာခရီးသည်အားဖြင့်မေ့လျော့ပစ္စည်းများ, ဇူလိုင်လ 2019 နည်းလမ်းများ။ အဆိုပါလေလံပွဲ Karakoy ဘူတာအဆောက်အအုံမှာ22019 ဇူလိုင်လ 09.00-12.00 နာရီမှာဘတ်စ်ကားအင်္ဂါနေ့အကြားကုန်ပစ္စည်းများအတွက် IETT ကျင်းပလိမ့်မည် [ပို ... ]
ပဌပြန်ပေးဆွဲနှင့် Marmaray Metrobus ခရီးသည်ဟင်းချိုလူငယ်များသို့ဖြစ်ပါသည်
Zeytinburnu မြူနီစီပယ်ခြင်း, iftar နိုင်ငံသားများတက်များကိုမစောင့်ဘဲ, Cevizliနှောင်ကြိုးမှာ Metrobus ရပ်နားပူဟင်းချိုတာဝန်ထမ်းဆောင်ခဲ့ရသည်။ အဆိုပါအစာရှောင်ခြင်းလန်းဆန်းမှုအတွက်ဖွင့်တဲ့သူနိုင်ငံသားတွေဟာဟင်းချိုနှင့်အတူရပ်သူသူတို့ကလျှောက်လွှာနှင့်အတူကျေနပ်ခဲ့ကြသည်ဟုဆိုသည်။ ဥပုသ်လအတွင်း5သီးခြားစီ POINT ခရိုင် Zeytinburnu ခုနှစ်တွင်ဟင်းချိုဖြန့်ဖြူး BE မညျ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံ, ဒီကိစ္စကိုအတွက် AK ပါတီ Group မှİSKİရာခိုင်နှုန်းကရေ xnumx'y အတွက်၎င်း၏ကမ်းလှမ်းမှုကိုလက်ခံသဖြင့်အလုပ်ခွင်အတွင်းရာခိုင်နှုန်းကို 46 မှတက်၏အထူးလျှော့စျေးအတည်ပြုပေးခဲ့သည်။ ရေမှလစဉ်ငွေဖောင်းပွမှုနှုန်းကိုဖယ်ရှားခံခဲ့ရသည်။ ယင်း AK ပါတီ Group ၏အဆိုပြုချက်ကိုနှင့်အတူနောက်တဖန်လစဉ်ကျောင်းသား [ပို ... ]
စုစုပေါင်းအလွဲသုံးစားမှု Metrobus Flash ကို၏ဖြစ်ရပ်အတွက်ဖြစ်ပေါ်တိုးတက်မှု! .. အမှုကိုမတရားအဖမ်းခံရ
Metrobüslမုဆိုးကသူ့ထိုင်ခုံ၏ညှနျကွားထဲမှာသွားအမျိုးသမီးတစ်ဦးမှလာမယ့်ရပ်နေသည်ကိုသောသူအားဖြင့်နှောင့်အယှက်များနှင့်ထိုလူသည်ကိုယ်တော်တိုင် ars နှင့်အတူလွယ်အိတ်ထားခဲ့ပါတယ်။ အခြေအနေလူစည်ကား metrobus ကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့ကြောင်းထည့်သွင်းစဉ်းစားပေမယ့်တစ်ဦးအနေဖြင့်အပြီးငါရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိအဆက်အသွယ်သတိပြုမိ [ပို ... ]
ရုပ်တုဆင်းတုများကိုဖျက်သိမ်းရန်နယ်သာလန်ကနေဘတ်စ်ကားအားဖြင့် 2008 50 စဉ်အတွင်းအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် Kadir Topbaş၏ယခင်ဦးခေါင်းသည်ထင်ရှား။ , ဒါဟာ 65 ယူရိုသန်းကိုလက်ခံရရှိနှင့်ဘတ်စ်ကား Edirnekapi နှင့်Hasanpaşaကားဂိုဒေါင်ထဲမှာစောင့်ဆိုင်း၏တစ်နှစ်အကြာတွင်ကျရှုံးမှစတင်ခဲ့သည်။ ပြောင်လက်တောက်ပသောအနေဖြင့် [ပို ... ]
လမ်းနှစ်ဖက်ဆက်သွယ်အစ္စတန်ဘူလ်ရဲ့ Metrobus လိုင်းပါဝင်သည်ဟု 44 ရပ်တန့်မြေပေါ်, မသန်စွမ်းလူများအတွက်လက်လှမ်းဖန်ဆင်းခံရခြင်းဖွင့်လှစ်ပြီးနောက် 12 နှစ်ပေါင်း။ အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ဧပြီအတွက်ဆောက်လုပ်ရေးအတွက်တင်ဒါစည်းရုံးမည်, နှင့်အနိုင်ရလေလံ [ပို ... ]
Büyükçekmece Metro နှင့် Metrobus ဝငျကမျြး
နှစ်ဦးစလုံးက Metro မှ IMM နိုင်ငံတော်သမ္မတနှင့် AK ပါတီကိုယ်စားလှယ်လောင်းမြို့တော်ဝန်Mevlüt Uysal Buyukcekmece, Büyükçekmeceသူတို့ Metrobus ဆောင်ခဲ့ဦးမည်ကြောင်းကြေညာခဲ့သည်။ ဖေဖော်ဝါရီလ Gebze- အတွက် UysalHalkalı ခရီးသည်လိုင်းလည်းအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ် (IMM) နိုင်ငံတော်သမ္မတမှတ်ချက်ပြုခြင်းနှင့်ဖွင့်လှစ်ပါလိမ့်မည် [ပို ... ]
တီဘီရောဂါ Metrobus က M ကူးစက်?
ရာသီဥတုအေး, ဖြစ်ပွားခဲ့တဲ့တုပ်ကွေးရောဂါအဲဒီမှာတုပ်ကွေးရောဂါ။ အထူးသဖြင့်, ကျွမ်းကျင်သူများလူစည်ကားသောနေရာများနှင့်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးအာရုံစိုက်ထားပါတယ်။ သို့သော်ထိုကဲ့သို့သော Metrobus ကဲ့သို့သောအခြားယာဉ်များ၏စိုးရိမ်ရေမှတ်သင်မျှော်လင့်ထားကြောင်းသိပါသလော ရင်ဘတ်ရောဂါများအထူးကု Assoc ။ ဒေါက်တာ Serdar Kalemci, အမည်ရတီဘီ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလအခြေအနေများဆန့်ကျင်တိုက်ပွဲများ၏နယ်ပယ်အတွင်းက၎င်း၏ကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများပြီးစီးခဲ့ပါသည်။ အဆိုပါအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သဘာဝဘေးညှိနှိုင်းရေးစင်တာ (DCC) ကစစ်တန်းလျားတိုက်ခိုက်ရေးလှုပ်ရှားမှုများညှိနှိုင်းလျက်ရှိသည်။ ဝန်ထမ်းများအဘို့လူတထောင်783 357 တထောင်မော်တော်ယာဉ်များနှင့်အစ္စတန်ဘူလ်တစ်ပျူငှါနွေးထွေးသောရသောအချိန်သည်ဆောင်းကာလဖြုန်း [ပို ... ]
စခန်းများအားသွင်း Cordless သဘာပတိ၏တိုးမြှင့်အရေအတွက်
ကော့ဒလက်လက်လှမ်းအားသွင်းဘူတာမသန်စွမ်းနိုင်ငံသားတွေရဲ့ဘဝတွေကိုလွယ်ကူချောမွေ့နေဆဲဖြစ်သည်။ အစ္စတန်ဘူလ်၏ဥရောပဘက်မှာ CK Bogazici လျှပ်စစ်စွမ်းအင်မှ General Manager Khaled စေ 13 အမှတ်နှစ်ပေါင်း 25 လာမယ့်သတင်းကောင်းထွက်ဘူတာစွမ်းအင်သုံးဘီးတပ်ကုလားထိုင်အားသွင်း၏နံပါတ်ပေါ်တင်လိုက်တယ် [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, ဝန်ဆောင်မှုရဲ့အရည်အသွေးတိုးတက်လာဖို့နိုင်ငံသားတွေ, တဖြည်းဖြည်းစေ့စပ်တဲ့ယဉ်ကျေးမှုဆိုင်ရာထောက်ပံ့ရေးလိုင်းများအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနှင့်လွှဲပြောင်းအလေ့အထများပေးနိုင်ရန်အတွက်ဘတ်စ်ကားနှင့်မြေအောက်ရထားများအကြားအခမဲ့လွှဲပြောင်းခွင့်ပြုခြင်း, ပုဂ္ဂလိကမော်တော်ကားများအသုံးပြုမှုလျှော့ချပေးပါတယ်။ အခမဲ့ [ပို ... ]
သငျသညျ Metrobus ပျက်ယွင်းနေဓာတ်လှေကားနှင့်လှေကားစတင်ပြုပြင်
ကို Maintenance နှင့်ပြုပြင်အလုပ်အစ္စတန်ဘူလ် Metrobus လိုင်းအတွက်ပျက်ယွင်းနေစက်လှေကားနှင့်ဓာတ်လှေကား၏နိုဝင်ဘာလ 1 အတွက်စတင်ခဲ့သည်။ kike İETTယခင်က installed ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုနူးညံ့စက်တင်ဘာလ2နှင့် 265 သန်းစာချုပ်မှာထပ်မကြာသေးမီကတထောင်ပေါင်ကျင်းပခဲ့သည် [ပို ... ]
တူရကီနိုင်ငံသည်နည်းပညာလယ်ပြင်၌နှစ်စဉ်ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်စစ်တပ်သည်လယ်ကွင်းအဖြစ်ကောင်းစွာကဲ့သို့သောအခြားကဏ္ဍများတွင်ရာ၌တိုးတက်မှုများကိုငါတို့သည်ယခုကျွန်တော်တို့ရဲ့ကိုယ်ပိုင်ထုတ်ကုန်ထုတ်လုပ်ရန်စတင်ပါလိမ့်မယ်။ တူရကီနိုင်ငံသည်နည်းပညာလယ်ပြင်၌နှစ်စဉ်ကြီးထွားနေဆဲဖြစ်သည်။ ပိုင်ဆိုင် [ပို ... ]
Metro, အလုပ်သမားစခန်းထဲမှာ Metrobus တူအထွက် Wagon
"အစ္စတန်ဘူလ်အထူးသဖြင့်အမျိုးသမီးများအတွက်မှာအားလုံးအန္တရာယ်ကင်းစွာမျှမက, သင်၏မယားကိုသင်စိတ်ပျက်နေကြသည်ကိုသင် CHP အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်နောက်ဆုံးအမည်အလားအလာကိုယ်စားလှယ်လောင်းအစ္စတန်ဘူလ်လက်ထောက် Gursel Tekin, သူ့အကြီးစားမြို့တော်၏အစအဦးပါဝင်သည် "တစ်နေရာရာမှာတစ်ဦးတည်းကသင်၏မိန်းကလေးကလေးသည်တင်သွင်းသည့်အခါ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Metrobus ပေးနေတာ
Metrobus ကြောင့်အမြီး၏အစ္စတန်ဘူလ်Beylikdüzü Metrobus မီတာအတွင်းကြည့်ရှုလော့နှင့်Şükrübeyမှတ်တိုင်၏ကျရှုံးခြင်း၏လမျးညှနျခဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ တချို့ကနိုင်ငံသားတွေငါဆင်းAvcılar Metrobus အတွက်လမ်းလျှောက်သည်အထိစောင့်ဆိုင်းရန်မလိုချင်ကြဘူး။ ကBeylikdüzü Metrobus Şükrübeyဦးတည်သွားလာတစ်မှတ်တိုင်မှကြွလာသောအခါ, လက်ခံရရှိသောသတင်းအချက်အလက်များအရ [ပို ... ]
ဥရောပ Mobility ကိုအပတ်စနေနေ့မှာနယ်ပယ် 22 စက်တင်ဘာလ 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေးဆိုလိုသည်အများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးဝန်ဆောင်မှုအဖြစ်ဆောင်ရွက်ပါလိမ့်မယ်။ ဥရောပနှင့်အတူစက်တင်ဘာလ 16 22 အကြားနှစ်စဉ်နှစ်တိုင်းကျင်းပသောအစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်, "ထံမှလက်ခံရရှိသတင်းအချက်အလက်များအရ [ပို ... ]
နှစ်သစ်ကူး IMM ဆောင်ရွက်ချက်များဆုံးမဩဝါဒပေး
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ယခုနှစ်ရဲ့ "Intelligent မြို့ပြဖြစ်ထွန်းမှု" ဟုအဆိုပါစီမံကိန်းအားအကောင်အထည်ဖော်များ၏အခြေအနေတွင်အသစ်တစ်ခုအယူအဆဖြစ်ပါတယ်။ 2018-2019 ပညာသင်နှစ်, မိဘများကသူတို့ရဲ့ဝန်ဆောင်မှုအခကြေးငွေ, ဝန်ဆောင်မှုနှင့်ယာဉ်မောင်းအင်တာနက်ကိုကျော် query နိုင်ပါလိမ့်မည်သင်ယူနေကြသည်။ ကျောင်းများ၏ 17.09.2018 06 သမိုင်းများတွင်နေ့ကိုကဖွင့်လှစ်ခဲ့ပါသည်: 00 [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်အတွက် Pete ပုလင်းမှာ, Akbil ကာလစတင်ဖြည့်
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်သဘာဝပတ်ဝန်းကျင်ညစ်ညမ်းမှုကိုကာကွယ်တားဆီးဖို့အသစ်တစ်ခုစီမံကိန်းကိုစတင်ပေးခဲ့ပါတယ်။ Pete ပုလင်း automata (akbil) ပစ်ဆာဖြစ်လိမ့်မည် istanbulkart ။ ကူးပြောင်းခြင်းထောကျပံ့မညျဤစီမံကိန်းအတွက်အိမ်မွေးတိရစ္ဆာန်ပုလင်းအဆာ akbil အချို့ကိုအောင်ဘယ်လိုအံ့သြနေသည်။ [ပို ... ]
အစ္စတန်ဘူလ်ပြည်သူ့သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးနေ့အတွက် 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုလျှော့စျေးအတွက်
အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညီလာခံတွင်ယခင်ပွဲတော်များအတွက်အပိုဆောင်းအများပြည်သူသယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလေယာဉ်ခရီးစဉ်များအဖြစ်ဤအယာဉ်များ 50 ရာခိုင်နှုန်းကိုမိတ်ဆက်နှင့်သယ်ယူပို့ဆောင်ရေးလျှော့စျေးအပေါ်ဆုံးဖြတ်ချက်တွေမချခံခဲ့ရသည်။ အနစ်နာခံ၏ပွဲများအတွက် 21-24 သြဂုတ်လတစ်လျှောက်လုံးအနိုင်ငံသားများ [ပို ... ]
ရွှေချိုတံတားပေါ်တွင်သူတို့အလုပ် Downtime လိမ့်မယ် Metrobus လေ့လာရေးခရီးကတ္တရာသုံး
ပြန်လည်ပြုပြင်မွမ်းမံအလုပ်ရွှေဦးချိုတံတား Metrobus နှစ်ညကတ္တရာလမ်းအမှုကိုပြုလိမ့်မည်လမ်းကို Maintenance နှင့်အခြေခံအဆောက်အအုံန်ဆောင်မှုများဦးစီးဌာနသမားတွေ၏အစ္စတန်ဘူလ်မြို့တော်မြူနီစီပယ်ညွှန်ကြားမှု။ ဗဟိုတံတားကနေKadıkoyEdirnekapı-side ဦးတည်ချက်အတွက် traffic စီးဆင်းမှု။ ဤအကြောင်းကြောင့်, လေ့လာမှုကာလအတွင်း (D-100 လမ်း [ပို ... ]